မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ဖြင့် မီတာဘီလ်ပေးဆောင်နိုင်သည့်မြို့နယ် ၃၀ အထိရှိလာ... | မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
» Internet journals
» မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ဖြင့် မီတာဘီလ်ပေးဆောင်နိုင်သည့်မြို့နယ် ၃၀ အထိရှိလာ...
မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ဖြင့် မီတာဘီလ်ပေးဆောင်နိုင်သည့်မြို့နယ် ၃၀ အထိရှိလာ...
မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ဖြင့် မီတာဘီလ်ဆောင်နိုင်သည့်စနစ်ကို သမ၀ါယမဘဏ်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လက်ရှိ်တွင် ဆောင်ရွက်နိ်ုင်သည့် မြို့နယ် ၃၀ အထိရှိလာကြောင်း သိရသည်။
Mobile Banking မှ တိုက်ရိုက် မီတဘီလ်ပေးဆောင် နိုင်သောမြို့နယ်များမှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ဒဂုံမြို့နယ်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရွေပေါက်ကံမြို့နယ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ လသာမြို့နယ်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ မြောင်းတကာမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်မြို့နယ် တို့ဖြစ်ကြောင်း သမ၀ါယမဘဏ်မှ သိရသည်။
မြို့နယ် ၁၃ ခု အတွက် မီတာဘီလ်များကို CB Bank မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ဖြင့် ပေးချေနိုင်ရန် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သတ်မှတ်ထားသောနောက်ဆုံးပေးဆောင်ရမည့် ရက်ထက် (၂) ရက်ကြိုပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြွေးကျန်ရှိမည်ဆိုပါက ပေးဆောင်၍ ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ကို Login ဝင်ပြီး Payment နေရာမှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ကာ
YESC Bill Payment နေရာတွင် ပေးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မီတာစာရွက်ပေါ်တွင် ရှိသော ကုတ်နံပါတ်များရိုက်နှိပ်ကာ ကျသင့်ငွေပေးဆောင်ပြီးနောက် Success အမှတ်အသား ညွှန်ပြပြီးပါက မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်မှ မီတာဆောင်ခြင်း ပြီးမြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Internet Journal မှပြန်လည်ဖော်ပြပေးသည်။
: မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ဖြင့် မီတာဘီလ်ပေးဆောင်နိုင်သည့်မြို့နယ် ၃၀ အထိရှိလာ...
: မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ဖြင့် မီတာဘီလ်ဆောင်နိုင်သည့်စနစ်ကို သမ၀ါယမဘဏ်မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လက်ရှိ်တွင် ဆောင်ရွက်နိ်ုင်သည့် မြို့နယ် ၃၀ အထိရှိလာေ...
ချစ်သူနှစ်ဦးအား ကိုယ်လုံးတီး သစ်ပင်တွင် ချည်နှောင်...
FBI အနေနဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို ဝရမ်းမလိုပဲ Hack လုပ်ခွ...
iPhone7ကို အာကာသမီးခိုးရောင်အစား နက်ပြာရောင်နဲ့ ...
Facebook Live ကို MSQRD မှ filter များဖြင့် မကြာမီ...
CEO scam မှုခင်းများကြောင့် ကန်ဒေါ်လာ ၃.၁ ဘီလျံဆုံးရ...
Samsung 5.0 နဲ့ 6.0 ဖုန်းများ System Update လုပ်လိ...
Android Phone အားလုံးနီးပါးကို မြန်မာစာ မှန်ကန်စေေ...
Digital Life Journal ( Vol-5, No-8 )
ဖုန်းမှာ Movie တွေကို ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်...
Battle စစ်တိုက်ဂိမ်းကောင်းလေး - Battle Ages APK MO...
လိပ်နင်ဂျာ ဖိုက်တင်ဂိမ်းကောင်းလေး - Ninja Turtles:...
ကမ္ဘာကျော် ဖိုက်တင်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ကစားရမ...
Galaxy Note7တွင် ၅.၈ လက်မ curved screen နှင့် 6G...
HTC အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်း ပီတာချူ ကုမ္ပဏီမှ တရာ...
တနေ့ တနေ့တော့ ငါဝယ်နိုင်မှာပါ...(အပိုင်း၁)
Mobile Knowledge နှင့်ဇာတ်လမ်းလေး(ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပ...
Frantic shooter Game [38 MB] [apk]
iphone ဖုန်းတွေကို Recovery Mode ဝင်ဖို့ အလွယ်ဆုံး...
Sony Xperia Z4 Tablet to Android 6.0 Marshmallow ...
Sony Xperia Z2, Z3, and Z3 -Android 6.0.1 Marshmal...
Samsung Galaxy Note-5 Android ဗားရှင်း 6.0.1 (All ...
Root မလို့ပဲ - All Meizu Memos - တွင် မြန်မာဖောင်...
Erotic Agent II (2003) 18+ HD
East-West Neighbors (2016) 18+ HD
Euro 2016 PSP ဘောလုံးဂိမ်းအသစ်လေးပါ Pes 2016 Psp ...
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းအမှတ်တရ တေးသီချင်းများ စုစည်းမ...
Meizu devices များစွာအတွက် Installing Google Play...
ကျောင်းကားမောင်း Game [68.3 MB] [apk]
ဖုန်းမှာတင် သွေးခုန်နှုန်းကို တိုင်တာနိုင်တဲ့ - Ins...
Mobile Guide Journal ( Vol-3, No-57 )
ကမ္ဘာကျော် ဖိုက်တင်ဂိမ်းကောင်းလေး - MORTAL KOMBAT X...
ဖုန်းမှာ သီချင်းတွေကို Mix ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ - MIXTR...
ညီငယ်တွေအကြိုက်ဇာတ်ကောင်တွေ တိုက်ခိုက်ကစားရမယ့် - ...
ဘောလုံး မန်နေဂျာ ဂိမ်းကောင်းလေး - Football Chairma...